Gabar 2 sano ah oo baabuur dusha ka martey dad badan oo iska indho tirey+VIDEO – SBC
Gabar 2 sano ah oo baabuur dusha ka martey dad badan oo iska indho tirey+VIDEO
Posted by editor on October 18, 2011 Comments
(DIGNIIN: MUUQAALO NAXDIN LEH) Mid ka mid ah dhacdooyinkii dunida ugu foosha xumaa ee ka baxsan bini’aadamtinimada si weyna looga qaracmay, cambaareyn, xabsi, hadal hayen iyo yaab badanna abuurtey ayaa dhawaan ka dhacdey wadanka Shiinaha ka dib markii todobaadkii hore gabar yar oo 2 sano jir ah baabuur inta jiirey, darawalkii uu mar kale ku duldhaqaaqay hadana isaga tagey, gaari kalena dusha ka sii marey in ka badan 20 qof-na ay jidka ku sii dhaafeen gabadhaasi yare e naftu ku sii daba yar tahay.
Warbaahinta aduunka gaar ahaan Telefishinka oo laga baahiyey dhacdadan argagaxa leh ayaa waxay ka dhacdey magaalada Foshan ee gobolka Guandong ee dalka Shiinaha 13-kii bishan October .
Gabadha yar oo magaceeda lagu soo koobay Yue Yuem ayaa ku jirtaa ilaa iyo hada xaalad koomo ah oo ka dhalatey baabuurtii ay jiirsiiyeen darawalantii arxanlaawayaasha ahaa.
Wakaalada wararka Shiinaha ee Xinhua ayaa baahisay in gabadhan laba jirka ah ay si qalad ah ku soo gashay wado laami ah oo baabuur ku socota, waxaana si arxan daran ugu dhuftey gaari iyadoo darawalku markii uu dareemay in uu jiiray uu dib ugu soo celshay ka dibna uu ka sii dhaqaaqay.
Gabadhii yareyd oo dhiig ka socdo isla markanaa qaarka dambe oo dhan dhaawac ka ah oo wadada taal ayaa waxaa marba doc isaga dhaafdhaafay dad lugeynaya, baabuur iyo mootooyin, waxaase ugu naxdin badnaa iyadoo dhaawac ah oo wadada dhextaal ayaa gaari kale dusha ka sii marey.
Wargeyska China Daily ayaa qorey in gabadhan waalidkeed ay yihiin dad soo galooti ah, iyadoo waalidkood gaar ahaan hooyadeed oo raadinaysa gabadheeda ay ku soo baxdey iyadoo dhiig badani ka socdo qofna isku dayayo in uu caawiyo.
Qofka isku dayey in uu caawiyo gabadhaasi yar ee dhibaatadu soo gaartey ayaa ahaa qofkii 20-aad ee arka oo gees ka mara waxaana lagu tilmaamay arxan daradii ugu dareyd iyadoo warbaahinta Shiinuhu ku tilmaameen arin foolxumo iyo ceeb ku ah dadka iyo dalka Shiinaha.
Link-ga Video-ga hoose ka daawo shilkaasi sidii uu u dhacay, Digniin waxaa ku jira muuqaalo qaracan iyo naxdin leh ee ka digtoonow.